Ma Dhabbaa In Haddii Aad Xaaskaaga La Qaybsato Howsha Guriga Inay Ka Hortagi Karto Khilaafka Qoyska? | Berberatoday.com
Ma Dhabbaa In Haddii Aad Xaaskaaga La Qaybsato Howsha Guriga Inay Ka Hortagi Karto Khilaafka Qoyska?
November 30, 2018 - Written by Berbera Today
Barnaamij looga golleeyahay xallinta khilaafaadka qoyska soo dhexgala oo laga hergeliyay dalka Rwanda ee qaaraddan Afrika waxaa uu ragga barayaa sida ay uga qeyb qaadan lahaayeen cunto karinta iyo nadaafadda guriga taaso ah howl inta badan ay qabtaan haweenku. Darasaad dhawaan lasoo saaray ayaa muujinaysaa in arrintaasi ay qeyb ka qaadan karto xallinta dhibaatooyinka ka dhex jira qoysaska.
Muhoza Jean Pierre wuxuu garaaci jiray xaaskiisa, wuxuuna u arkay sababta uu u guursaday inay ahayd inay carruur u dhasho oo kaliya ah. “Waxaan raacayay waddadii uu qaaday aabahay, aabahey shaqada guriga ma aanu qaban jirin” ayuu yidhi Muhoza Jean Pierre.
Wuxuu sheegay in xaaskiisa uu ku odhan jiray inaanay waxba qabsan karin isla markaasna qoyskii ay kasoo jeeday ay dib ugu laabato. Balse wuxuu sheegay in xilliggaasi ka dib ay noloshiisa wax iska baddaleen, wuxuuna bartay sida guriga loo nadiifiyo iyo cunno karinta.
Barnaamijka xallinta khilaafaadka qoyska waxaa laga bilaabay tuulada Mwulire oo ku taalla bariga waddanka Rwanda, waxaana ragga lagu dhiiri-gelinayaa inay qabtaan howsha guriga oo ay kamid tahay inay hayaan carruurta oo ay ka qayb qaataan xannaaneyntooda, shaqadana inta badan waxaa qabta haweenka.
Jean Pierre wuxuu sheegay in mashruuca lagu magacaabo ‘Bandebereho’ oo luuqadda dalkaasi ku noqonaysa “Tusaale wanaagsan” wuxuu wax ka baddalay noloshiiisa. Wuxuu galay fasal lagu barto cunto karinta, nadiifiinta guryaha iyo sidii looga hortaggi lahaa caadooyinka soo jireenka ah ee bulshada ee ka dhanka ah xuquuqda haweenka.
‘Ragga Dhabta Ah Cunto Ma Kariyaan?’
Macalimiin ka socda mashruuca ‘Bandebereho’ ayaa Jean Pierre baray howl uu rumaysnaa inay qaban karto xaaskiisa oo kali ahi. Wuxuu yidhi: “Marka aan guriga ku laabto waxaan dib u qaban jiray wixii la i soo baray, waxaan sameyn jiray tabbabar iyadoo la ii hagayo sida aan cuntada u karinayo. Hadda waxaan bartay sida cuntada loo kariyo, waxaan maydhaa dharka carruurta, waxaan bartay sida loo kariyo Muuska iyo Daqiiqada” ayuu yidhi ninkan lagu magacaabo Muhoza Jean Pierre. Inakstoo la baddali karo Jean, haddana waxay u muuqata in saaxiibadii aanay niyad jab ku reebi karin si uu u qabto howsha guriga, waxay ku yidhaahdaan: “Ragga dhabta ahi cunto ma kariyaan’.
Wuxuu sheegay in qoyskiisa iyo saaxiibadii ay aaminsan yihiin in xaaskiisu ay siisay daroogo sababtoo ah waxay rumaysan yihin in nin fayow aan lagu arki karin waddooyinka isagoo dusha ku sita qoryaha dabka lagu shido. Balse Jean Pierre wuxuu iska dhaga tiray arrimahaasi, wuxuuna sii watay howsha guriga.
Waxa uu sheegay in carruurtiisu ay hadda kalgacal dareemayaan isla markaasna xaaskiisu ay hadda ku howlantahay ganacsi. “Sidii ay iila dhaqmi jirtay xaaskeygu, wax wayn ayaa iska baddalay, si xun ayay iila dhaqmi jirtay, hadda wax kasta waxaan ku dhameynaa wadahadal”
Xaaska Pierre, Musabyimana Delphine waxay sheegtay in markii hore ay xorriyad la’aan iyo cabsi ay ku nooleyd. Waxay tidhi: “Mararka qaar waxaan isku haystay in aan ahay sida qof shaqaale ah, weligey niyaddayda kuma soo dhicin in haweeney ay yeelan karto lacag sababtoo ah ma qaadanin wakhti aan kaga fakaro howl aan ganacsi ku samaysto”
Waxay sheegatay in hadda ay haysato xorriyad ku filan ayna guriga dibadda uga baxdo si ay usoo shaqeysato. Delphine waxay ka baxdaa gurigeeda subaxdii si ay Muuska ugu suuq gayso magaalada halka ninkeeda Jean Pierre carruurta afarta ah ay dhaleen uu sii ilaaliyo isla markaasna uu cunto usii kariyo. Waxay tidhi: “Marka aan imaad guriga, waxaan u imaadaa cuntada oo diyaar ah”
Mashruucan waxaa laga aasaasay dalalka Laatiin Amerika, waxaana fikraddiisa lahayd urur lagu magacaabo MenCare, waxayna rumaysan yihiin in ragga iyo haweenka ay kala qeybsabadaan howsha guriga gaar ahaan marka ay timaaddo cunto karinta iyo xannaaneynta carruurtu.